भरतपुर अस्पताल बच्चाको उपचारमा विशेष ध्यान दिदै – Saurahaonline.com
भरतपुर अस्पताल बच्चाको उपचारमा विशेष ध्यान दिदै
चितवन, कात्तिक २५ । राजधानी बाहिर सबैभन्दा बढी प्रसुति गराउँदै आएको भरतपुर अस्पतालमा बच्चाहरुको उपचारका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा बिशेष ध्यान दिन थालिएको छ । नवजात शिशुदेखि हुर्कंदै गरेका बच्चाहरुको उपचारमा अस्पतालले ध्यान दिन थालेको हो ।
अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग बिशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलाका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा अस्पतालले ध्यान दिन थालेको छ । अस्पतालमा १० जना बालरोग बिशेषज्ञ रहेकाले उपचार गर्ने ठाउँ र उपकरण भएमा अन्यत्र जान नपर्ने गरी यही उपचार गर्न सकिन्छ । अस्पतालमा हाल नवजात शिशु सघन उपचार कक्षमा १२ वटा शैया रहेका छन् । जसमा रहेका दुई वटा भेन्टीलेटरमध्ये एउटामात्र चालु अवस्थामा रहेकोमा थप चार वटा जडान गरिँदैछ ।
बिग्रिएको मनिटरलाई पनि मर्मत गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ । केहि दिनभित्रमा ६ वटा मनिटर सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनु भयो । राजधानी बाहिर यति धेरै शैया शिशु सघन उपचार कक्ष सञ्चालन भरतपुरमा मात्र भएको बसौलाले बताउनु भयो ।
अस्पतालले बच्चा जन्मिएको एक घण्टाभित्रमा भिटामिन के खुवाउन पनि सुरु गरेको छ । यसको अभावमा बच्चा ठूलो हुँदै जाँदा टाउकोभित्र रगत बग्न सक्छ । बसौलाका अनुसार अस्पतालमा २९ दिनदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिका राख्ने बाल सघन उपचार कक्ष छैन । त्यसका लागि पनि प्रशासनिक तवरबाट पहल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । हालैमात्र यो कक्षको अभावमा सर्पले डसेको एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका वरिष्ठ प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. सुनीलमणि पोख्रेल एक वर्षमा १५ हजारभन्दा बढीको अस्पतालमा प्रसुति गराउँदै आएको बताउनु हुन्छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत हाराहारीलाई शल्यकृया गरेर बच्चा झिकिन्छ । अस्पतालमा जन्मने बच्चामध्ये दुईदेखि तीन प्रतिशतलाई नवजात शिशु सघन उपचार कक्षमा राख्नुु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । निजी अस्पतालमा राख्दा दैनिक १० हजार हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा एक हजार खर्चले पुग्छ ।
पोख्रेलले अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष नहुँदासम्म धेरै बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाएको बताउनु भयो । २०७२ साल चैत २४ गतेबाट अस्पतालमा यो सेवा सुरु गरिएको हो । उहांँका अनुसार यो कक्ष सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिले निम्नवर्गीय परिवारका व्यक्तिले आर्थिक अभावमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्षमा निजी अस्पतालमा लैजान सक्दैनथे । जे हुन्छ यही उपचार गरिदिन उनीहरुले आग्रह गर्ने गरेको उहांँले बताउनु भयो । जसका कारण उपचारकै अभावमा कतिपय नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको भएपनि आजभोलि यो समस्याबाट छुटकारा पाएको पोख्रेलले बताउनु भयो ।
भरतपुर अस्पतालमा चितवन र छिमेकी जिल्लाबाट बिरामीहरु आउने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले बताउनु भयो । अस्पतालमा धेरै बच्चा जन्मने हुँदा उनीहरुको उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक सेवा बिस्तार गर्न लागिएको उहांँको भनाई छ ।